किन पत्याउँदैन आर्यनलाई अमेरिकाले, यसपाली पनि भिषा रद्ध भएकै हो ?
काठमाडौँ - किन पत्याउँदैन नायक आर्यन सिग्देललाई अमेरिकाले ? किन बारम्बार भिषा रद्ध हुन्छ आर्यनको ? फेरि एक पटक आर्यनको पासपोर्टमा नेपालमा रहेको अमेरिकी दुतावासले रिजेक्टको छाप लगाएको छ । प्राप्त जानकारी अनुसार आर्यनको यो पाँचौ पटक हो । यसअघि चार पटक अमेरिकी दुतावासले उनको भिषामा रिजेक्ट छाप लगाइसकेको छ ।